ccproxy အသုံးပြုပုံ (မြန်မာ)
ကိုဖိုးလပြည့် ရေးပေးထားတဲ့ ccproxy အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . စာအုပ်ထဲမှာ ccproxy software ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . စာအုပ်ကို download လုပ် ဖတ်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ .
မိမိတို့အိမ်မှာ အင်တာနက်တပ်ဆင်ရင် သားသမီးတွေအတွက် မကြည့်သင့်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ပင်ချင်သလား ?
အင်တာနက်ကဖေးများအတွက် user တွေကို bandwidth ကန့်သတ်ချင်ပါလား ?
web cache အနေနဲ့ အင်တာနက် speed ကိုပိုမိုမြန်စေချင်ပါလား ?
မိမိတို့ ပေးသုံးစေချင်တဲ့ စက်ကိုပဲ ip address, mac address စသဖြင့် password နဲ့ပါ control လုပ်ချင်ပါသလား ?
client စက်တွေကို ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိပဲ အချိန်နဲ့ ကန့်သတ်အသုံးပြုစေချင်ပါသလား ?
client စက်တွေ ဘယ်ဆိုက်တွေ ဖွင့်နေတယ် ၊ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ သိချင်ပါသလား ?
စသဖြင့် စသဖြင့် အဲဒါတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်ချင်ရင်တော့ CCproxy software နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲလိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဆာဗာထိုင်မဲ့စက်မှာ NIC(Network Card) ၂ ခု ရှိရပါမယ်။
တစ်ခုက အင်တာနက်ကြိုးအတွက်ဖြစ်ပြီး ၊ နောက်တစ်ခုက မိမိအင်တာနက်ပြန်ပေးမဲ့ local network အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ ပြည့်စုံပြီးဆိုရင်တော့ CCproxy software ကို ဒေါင်းလုပ်လိုက်ပါ ။
Download ifile.it | Download mediafire | Download zshare | Download ziddu